Siyaasiyiin kasoo jeeda G/Waqooyi Bari oo bilaabey tallaabo ka dhan ah Al-Sh – Radio Baidoa
Siyaasiyiin kasoo jeeda G/Waqooyi Bari oo bilaabey tallaabo ka dhan ah Al-Sh
Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta ku nool deegaannada Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo kaashanaya Cullimada ayaa waxaa ay bilaabeen wacyigelin ka dhan ah Al-Shabaab oo mararka weerar ka fuliya deegaano ka tirsan gobolkaas.
Odayaasha iyo Siyaasiyinta ayaa socdaalo kala duwan waxaa ay ku bixinayaan deegaannada Gobolka Waqooyi Bari,iyaga oo qeybaha kala duwan Bulshada u sheegaya inay Al-Shabaab dhibaato ku hayaan dadka deegaannada Gobolkaas kana soo horjeesteen.
Dr Maxamed Daahiye Ducaale oo kamid ah Mudanayaasha laga soo doortey degmada Dhadhaab ayaa sheegay in qorshaha Shabaab ka doonayaan Gobolka uusan noqon mid hirgala,waxaana uu Shacabka ugu baaqay inay ka hortagaan.
Si kastaba Al-Shabaab ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ay kordhiyeen weerarada ay ka fuliyaan Gudaha dalka Kenya,iyada laba todobaad Gudahood ay fuliyeen Saddex weerar oo khasaaro geystay.
Madaxweyne Farmaajo oo safar deg deg ah ku tegaya Ereteriya
Ciidamada Dowlad goboleedka Jubbaland oo dhaq dhaqaaqyo ciidan kawada deegaano duleedka ka ah Magaalada Kismnaayo